Teny fito: (3) – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mai 12, 2012 mai 12, 2012 Laisser un commentaire sur Teny fito: (3)
« … Hoy Izy tamin’ny reniny : Ravehivavy, indro ny zanakao! Ary hoy koa Izy tamin’ilay mpianatra: Indro ny reninao! »Jaona 19:26-27
Mahagaga tokoa ity tarehin-javatra iray ity! Hazo roa nakambana, ny iray mijoro, ary ny iray mitsivalana, izay natao hijalian’ny olona nanao ratsy ka voaheloka. Tany amboalohany io hazo io dia hazo tokana mitsangana, fa taty aoriana dia io hazo roa misampana io, ary tamin’io hazo misampana roa io no nanomboana an’i Jesosy Kristy. Izay nanomboana an’i Jesosy azy izay no nahatonga an’io hazo io nalaza. Lasa nanana hevi-dalina ny ikambanan’ireo hazo roa ireo: mitsangana sy mitsivalana. Ny heviny dia izao:
– ny mitsangana: ny ilany voalohany manondro ny lanitra ary ny ilany faharoa mitsatoka amin’ny tany dia manondro antsika olombelona. Ny hevitr’izany dia ny fampihavanana antsika olombelona amin’Andriamanitra any ambony any.
– ny mitsivalana, dia manambara ny fisian’ny olona samy olona samy ety amin’izao tontolo izao, ary io hazo mitsivalana io dia manambara ny fampihavanana ny samy eto amin’izao tontolo izao.
« Fa Izy no fihavanantsika, izay naha-iray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana. » Ef. 2:14
Notanterahin’i Jesosy izany fampihavanana izany eto amin’ity teksta ity. Dia hoy Izy tamin’ny reniny: « Ravehivavy, indro ny ny zanakao! » Ary hoy Izy tamin’ilay mpianatra: « Indro ny reninao. »
Sarotra ny mihavana na dia amin’ny samy olombelona aza. Mety eo ny toe-javatra maro samihafa mitarika fisarahana: ohatra ny fahasamihafana isan-karazany, na ny aretina, na ny firehana samihafa, sns. Ny nahagaga anefa teto dia voalaza fa tamin’izany ora izany dia noraisin’ilay mpianatra tany aminy izy. Kristy no fihavanatsika!
Ilay mpianatra: ilay mpianatra zatra niondana tamin’i Jesosy Ilay vehivavy: ny renin’i Jesosy, izay tena niraiki-po tamin’i Jesosy, izay tena zanany nateraky ny kibony.
Raha Jesosy no iraiketan’ny fitiavantsika, dia Izy no fampihavanana antsika tokoa, ary tsy miandry fotoana ela, na mitarika adi-hevitra be, fa tonga dia mihavana: ary tamin’izay ora izay dia noraisin’ilay mpianatra tany aminy izy.
Aoka isika samy ampihavanin’i Jesosy Kristy amin’Andriamanitra ary avy eo ho tonga ny fampihavanany antsika amin’ny ankohonantsika, amin’ny fiaraha-monina, sy ny hafa rehetra. Aoka isika,
rehefa avy nandray ny Fanjakan’Andriamanitra ao natintsika, izay naha-iray antsika amin’Andriamanitra, mba hitondra izany koa ho an’ny ankohonantsika, hitondra izany ho an’ny hafa, ary dia ho tanteraka amintsika samy isika ny fihavanana avy amin’i Jesosy Krisy!
« Ravehivavy, indro ny zanakao! Ary hoy koa Izy tamin’ilay mpianatra: indro ny reninao! Ary tamin’izany ora izany dia noraisin’ilay mpianatra ho any aminy izy »
Publié parfilazantsaramada mai 12, 2012 mai 12, 2012 Publié dansUncategorized